Oromo News 05.17.21 | KWIT
Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaaseti namni haarawa Covid-19 qabame 86 kan qabame yoo tau akka dhukubni kun jalqabe namni million shan ta’an qorannoo kan akka taasisan himan.
Governor Nebraska Pete Ricketts; seera corona virus kana haguugi fuula godhachuu, addaan fageenya fi barumsa mana barachuun akka yeroo muraasati martuu dhiifamu akka abdii qaban himan. Ricketts akka jetteti talaali kanaa fi uf eeydoni amma dhukubni namni qabamuu fi kan hospitala jirus xiqqaata akka dhufaa jiruf namni 100 gad guyyaa akka tae himan. Innis eebifamtoota Nebraska yoo talaali fudhatani hin jiraatin akka taalali fudhatan gaafate jira. Akkasumas akka ijoole xixiqqoonile talaali kana fudhatan kan qarqaaru ta’a.
Magaala Iowa Northwest umaanni akka magaala kesaa baqatee taa’u akkumaa ajjajameeti jiraa, sababaan isaas torbaan kanaa kessaa babuurri walittii bu’insaa iraa ibidaa kassuu kan ka’ee. Meesha sodaachisa gurguddaa kan qabatan makiina 47 dabalate guyyaa gidirsanbata seaati booda bakka Sibley (Sin-lee) jedhamu bira darbani jiran. Ummanis baaye kan rifateefi qorannoo irraa kan jiran yoo tau ragaan martinuu didillaa baabura jalatti akka jiganii jiran himan.
Oromo News 05.15.21
By Fatiya Adam • May 15, 2021
Eeydonni dhukkuba magaala Sioux City haasawa yeroo kaluutti godhan keessa namni talaali Covid-19 mulumatti fudhate hundi isaaniti ammaan booda haguugi fuula godhachuun akka hin barbaachifne himan. Haguugi fuula Buufata xayyaraa Gatewat, Goree Otoobisii magaala, fi Martin Luther King Ground transportation center keesssati akka godhatamuu himan. yoo bakka namni baayen walgahuu jiraatan magaala keessati haguugi fuula godhachuun akkuma dirqama ta’etti jira.